I-VI FNAC / Izono ze-Entido Graphic Novel Award | Izincwadi Zamanje
I-VI FNAC / Izono ze-Entido Graphic Novel Award
IMadrid, ngoMeyi 3, 2012. Ngenhloso yokukhuthaza nokukhuthaza ukukhiqizwa kwemibhalo emkhakheni wamahlaya, uFnac no-Ediciones Sins entido babiza uhlelo lwesithupha lomklomelo i-International Graphic Novel Award, baqhubeka nokuzibophezela kwabo ekukhuthazeni ukukhiqizwa kwemibhalo emkhakheni wamahlaya. .
Ohlelweni lwayo lokuqala (2007), umklomelo waya kumbhali uJorge González, we-'Fueye ', owashicilelwa ekupheleni kuka-2008. Ohlelweni lwesibili (2008), abaphumelele kwaba nguGuillaume Trouillard noSamuel Stento, be-'La Estación de imicibisholo '. U-Esteban Hernández nguyena owine uhlelo lwesithathu (2009) luka '¡Pintor!', UMireia Pérez nguye owaphumelela uhlelo lwesine (2010) lwe 'The wild girl' noJuan Berrio waba ngompetha 'Lwesithathu' ekugcineni edition, umsebenzi wakhe ozoshicilelwa ekupheleni kuka-2012.
Isikhathi esinqunyiwe sokulethwa kwemisebenzi yalolu hlelo lwesithupha sesivuliwe futhi sizophela ngomhlaka 30 Novemba 2012. Imithetho ezolawula lo mklomelo imi kanje:
1. Bonke ababhali abafisa ukwenza kanjalo, banoma iluphi ubuzwe noma imvelaphi, abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala bangafanelekela ukuthola uMklomelo, inqobo nje uma imisebenzi abayithumelayo ihambisana nomqondo ovame ukwenziwa wamanoveli wokuqhafaza futhi ihlangabezana nalezi zidingo ezilandelayo:
-Zibhalwe kuphela ngeSpanishi
- Zishicilelwe futhi azishicilelwe ngokuqinile (azishicilelwanga kufomethi yencwadi, encwadini
nge-elekthronikhi, nge-Inthanethi, noma nge-serial kumagazini).
- Azihambelani nababhali abashona ngaphambi kokumenyezelwa kwalolu cingo.
- Abakaze banikezwe phambilini komunye umncintiswano, noma banikezwa
kulindwe ukwahlulelwa kunoma imuphi omunye umncintiswano ngosuku lokuphela kokuphela.
Isimo esizokwethulwa emncintiswaneni singamahlaya, ngefomethi yaso yenoveli. Umbhali ngamunye kufanele ahambise isiphakamiso sencwadi esinamakhasi okungenani ayi-16 (96) aqediwe ohlangothini olulodwa kuphela; Ubude bokugcina, obunqobile, kuzoba ubuncane bamakhasi ayisishiyagalolunye nesithupha (16). Ingalethwa ngombala omnyama nomhlophe noma umbala, kufakwa idosisi enamakhasi aqediwe ayishumi nesithupha (4), nesihloko sawo esihambisanayo, kumakhophi aprintiwe ngefomethi ye-DIN-A2, kanye ne-synopsis eningiliziwe (amakhasi amabili (XNUMX) kwelilodwa eceleni okungenani) nokuqukethwe yindaba ephelele.
Amakhophi athi (umsebenzi wokuqala ngeke wamukelwe), uzophelezelwa yimininingwane yombhali noma yababhali: igama, isibongo, ikheli, ucingo, i-imeyili kanye nekhophi kamazisi, ipasipoti noma omunye umazisi owamukelwe ngokusemthethweni.
Lapho umklomelo usuklonyelisiwe, imisebenzi engaklonyeliswa ngeke isabuyiselwa. Njengoba kungezona ezangempela, zizobhujiswa uma inqubo isiqediwe.
Imisebenzi izothunyelwa noma ihanjiswe, ekhombisa emvilophini "VI International Prize for Graphic Novel Fnac-Sins Entido", ekhelini elilandelayo leposi: Ediciones Sins Entido / Calle Barquillo 11, 2º office 2, 28004 Madrid / umklomelo@sinsentido.es
Amaphrojekthi athunyelwe nge-imeyili noma kwimidiya ngaphandle kwephepha eliphrintiwe ngeke amukelwe (ngakho-ke, ukuthunyelwa kwi-CD, i-DVD, ukushayela ngepeni, noma okufanayo akufakiwe).
Umnqamulajuqu wokwamukelwa kweziphakamiso uzovalwa ngomhla ka-NOVEMBA 30, 2012.
Ijaji lizohlangana ekupheleni kuka-2012 bese isinqumo sizomenyezelwa ngoJanuwari 2013. Umbhali ozonqoba uzozibophezela ukuletha iphrojekthi eqediwe ngesonto eledlule likaJuni 2013. Umsebenzi ozowina uzoshicilelwa ekupheleni kuka-2013.
Kuzoklonyeliswa umklomelo owodwa nohlukanisiwe wama-euro ayizinkulungwane eziyishumi (eziyizinkulungwane eziyishumi) (ozokhokhwa ngezinkokhelo ezimbili: ama-10.000% ngenani ngemuva kokuxhumana kwesinqumo; kanye nama-50% asele ngesikhathi sokushicilelwa). Umsebenzi ozowina uzoshicilelwa ngu-Ediciones Sins Entido, ozobhekana nomsebenzi wokukhiqiza nokuhlela, bese kuthi owinile asayine inkontileka nalo mshicileli isikhathi esiyiminyaka eyi-0, esivuselelekayo nephesenti lobukhosi elingu-50%. Ukunikezwa kwalo mklomelo kusho ukuthi u-Ediciones Sins entido uzophatha kuphela wonke amalungelo okuxhashazwa womsebenzi, kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izilimi, kanye nawo wonke amalungelo okushicilela kuyo yonke imithombo yezindaba.
Ngasikhathi sinye, i-Fnac inelungelo lokuhlela ngezinto zokuqala zomsebenzi onqobayo umbukiso ongakhonjiswa emibhalweni yawo, eSpain nakwamanye amazwe.
Inani lomklomelo lizoba ngaphansi komthetho wokugodla imithethonqubo yentela.
Isinqumo sejaji sizoba sesokugcina, umklomelo kungenzeka ungamenyezelwa njengongekho emthethweni noma usatshalaliswe phakathi kwemisebenzi emibili noma ngaphezulu futhi uzonikezwa lowo msebenzi phakathi kwalabo abethuliwe ngazwilinye noma behluleka lokho, ngokuvotelwa iningi lejaji, kuthathwa njengokufanele ukunikezwa .
7. Ukusabalalisa kanye Nokwethulwa Komphakathi
Umsebenzi wokuwina uzosatshalaliswa yiSins Entido, kanti iFnac izoqinisekisa ukuqaliswa kwayo okukhethekile nokuxhumana kuzo zonke izindawo zayo zokuhweba.
Ukwethulwa emphakathini kwalo mklomelo kuzokwenzeka kwesinye seForamu ye-Fnac, noma yikuphi inhlangano okubona kufanele kakhulu.
I-Fnac ingumsabalalisi oholayo eYurophu wemikhiqizo yezobuchwepheshe namasiko, futhi yenza isibonelo esiyingqayizivele sobumbano phakathi kwezohwebo namasiko. Idalwe ngo-1954 eFrance, okwamanje iyingxenye yeqembu le-PPR futhi inezitolo eziyi-145 ezisabalale emazweni ayisikhombisa (iFrance, iSpain, iPortugal, i-Italy, iSwitzerland, iBelgium neBrazil).
Ukuqaliswa kwayo eSpain kwaqala ngoDisemba 1993, eCalle Preciados yaseMadrid futhi sekuvele kuyibhentshi elingenakugwenywa kuzo zombili izinhlelo nokusetshenziswa kwamasiko eSpain. I-Fnac inezitolo ezingama-21 kanye naleyo ebonakalayo, www.dcob.es. Ngaphezu kweMadrid, ikhona naseBarcelona, ​​eValencia, e-Alicante, eZaragoza, e-Asturias, eSan Sebastián, eMurcia, eBilbao, eMarbella, eMalaga, eSeville nase-A Coruña.
UCynthia Castiñeira Souto
UMnyango Wezindaba uFnac Spain
Izinhlelo zezono entido
USheila Fernandez Andrade
Umnyango Wezokuxhumana Wezono
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » I-VI FNAC / Izono ze-Entido Graphic Novel Award
UJosep María Berenguer ushonile